भाजपाले दियो दार्जीलिङलाई उम्मेदवार : को हुन त राजु विष्ट? - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारभाजपाले दियो दार्जीलिङलाई उम्मेदवार : को हुन त राजु विष्ट?
बताइएअनुसार राजु सूर्य रोशनी लिमिटेडका एमडि हुन्। उनी समाज सेवक पनि हुन्। गोर्खाहरूको सपना पूरा गर्ने ,गोर्खा स्वाभिमानलाई जिउँदो राख्ने, दार्जीलिङलाई ‘दार्जीलिङ मोडल’ बनाउने, दार्जीलिङमा केन्द्रिय विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने राजु विष्टले प्रतिबद्धता लिएको भाजपाले बताएको छ।
दिल्ली, 24 मार्च
मणिपुरका 33 वर्षीय युवा व्यवसायी राजु विष्टलाई भारतीय जनता पार्टीले गोजमुमो-गोरामुमोको समर्थनसहित दार्जीलिङ सिटको निम्ति उम्मेदवार दिने भएको छ। राजु काङपोख जिल्ला मणिपुरका बासिन्दा हुन्। दिल्लीको पश्चिम पञ्जाब बाघमा पनि उनको स्थायी बसोबास छ। । मतिगढा नजिक सैनिकपुरीमा पनि उनको निवास छ।
गोजमुमोग-गोरामुमो गठबन्धनपछि पहाडको राजनीतिमा निक्कै हल्लीखल्ली बढ्यो। पहाडमा भूमिपुत्रको लहर चलिरहेको बेला भाजपाका अगोर्खा केन्द्रिय नेताहरूको नाम उम्मेदवारको रूपमा अघि आइरहेको थियो।
यद्धपि, सबैको अनुमानलाई धराशयी बनाउँदै भाजपाले गोजमुमोका विमल गुरुङ अनि गोरामुमोका मन घिसिङका सहमतिमा नै राजु विष्टलाई दार्जीलिङ सिटको निम्ति उम्मेदवारकोरूपमा भाजपाले छानेको हो।
राजु विष्टको नाम अघि आउने वित्तिकै पहाडमा उनको नाम डढेलो सल्किएजस्तो फैलियो। उनीबारे पहाडवासीको जिज्ञासा ह्वात्तै बढेको छ।
राजु चियाबगानका श्रमिकहरूलाई न्युनतम रोजोगारी दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि भाजपाले बताएको छ। दार्जीलिङको पर्यटन ग्राम विकास, पउने पानी पनि उनको एजेन्डामा रहेको छ।
राजु विष्ट 20 वर्षदेखि भाजपाको आरएसएसमा काम गर्दै आइरहेका छन्। उनी विष्णु विष्टका छोरा हुन्। उनी सूर्या फाउण्डेसनका ट्रस्टी पनि हुन्। यही ट्रष्टबाट उनी सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेका छन्। उनले इकोनोमिक टाइम्स च्याम्पियन रुरल मार्केट अवार्ड, नर्थ इण्डिया बेस्ट ब्राण्ड अवार्ड पनि पाइसकेका छन् भने एशियामा नै उनी चर्चित व्यावसायिक नेतृत्वकोरूपमा पनि चिनिन्छन्।
उनको नाम दार्जीलिङ सिटबाट आएपछि सोसल मिडियामा एकाएक छाए। राजुसित गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङ अनि गोरामुमो मन घिसिङले बैठक गरेर चुनावी रणनीति बनिसकेको बताइएको छ।